Uhulumende kaMnangagwa Usefuna Ukujezisa Odokotela Abakhalala Umsebenzi
Bahambisa isigulane esibhedlela eHarare ...
Uhulumende uthi bonke odokotela abakhalala umsebenzi bazathoniswa ngeviki ezayo yikhomithi ekhangelane lezemisebenzi kuhlangothi lwezempilahle.
Uhulumende uthethe isinqumo lesi namuhla kulandela imihlangano eyenziwe yiziphathamandla lamagqwetha ohlangothi lwezempilakahle lohlangothi oluqhatsha odokotela olweHealth Service Board.
UDokotela Paulinus Sikosana, umgcinisihlalo wohlangothi lweHealth Service Board, uthi odokotela bayala ukukhulumisana lohulumende kulandela ukukhuphulwa kwama allowance abo ngokuphindiweyo – 100 percent.
Kodwa odokotela bathi incane kakhulu imali uhulumende akhuphule ngayo ama on-call allowances abo. Bathi udokotela munye ngamunye usethola 2,400 RTGS dollars nxa imali abayihola okwamanje eyama on-call allowances ikhuphulwe ngokulikhulu ekhulwini – 100 percent.
Bathi imali le incane kakhulu ngoba umnotho welizwe usugugudeka okokuthi intengo yempahla ikhuphuka nsukuzonke.
Kodwa-ke uhulumende uthi odokotela laba sebezenzela santando.
UDokotela Tawanda Zvakadauthi kabahambi ukuyathoniswa luhlangothi lolu. Lukhu kusekelwa nguDokotela Peter Magombeyi, owelatshwa kwele South Africa othumeze umlayezelo enkundleni yokuxhumana eyeTwitter, othi odokotela bangazihluphi ngalokhu okufunwa nguhulumende.
Umthethwandaba weLabour Court usanda kwethula isinqumo sokuthi odokotela kumele babuyele emsebenzini. Bona bathi kabalamali yokuya emsebenzi.
Ukuze sihlaziye loludaba sixoxe loDokotela Elophi Sibanda, ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa, othi kumele uhulumende adinge imali yokuvuselela izibhedlela eZimbabwe.
Ingxoxo Esiyenze LoDokotela Elophi Sibanda